बर्सेनि लाखौँ नेपालीको रोग पत्ता लाग्दैन/ टाइफाइडजस्तै लक्षण| Nepal Pati
बर्सेनि लाखौँ नेपालीको रोग पत्ता लाग्दैन
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक लाखौँ बिरामीको रोग पत्ता नलाग्ने गरेको सरकारी रिपोर्टले देखाएको छ । ज्वरो आएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको रोग नै पहिचान हुन नसकेको हो । ०७२/७३ मा स्वास्थ्य परीक्षण गराएकामध्ये ८ लाख ५० हजार बिरामीको रोग नै पत्ता नलागेको सरकारी तथ्यांक छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले गुणस्तरीय प्रयोगशाला नहुँदा लाखौँ बिरामीको रोग पहिचान हुन समस्या भएको बताए । ०७२/७३ मा मात्रै साढे आठ लाख बिरामीको रोग पहिचान नभएको बताए । सरकारी र निजी अस्पतालहरूबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा महाशाखाले तथ्यांक तयार पारेको हो ।
चिकित्सकहरूका अनुसार रोग पहिचान नहुने समस्या अधिकांश ज्वरोका बिरामीहरूमा देखिने गरेको छ । ज्वरो आउनुको कारण प्रयोगशाला रिपोर्टले नदेखाएपछि रोगको परीक्षणमै समस्या हुने गरेको छ ।
नयाँपत्रिकाका अनुसार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले ज्वरोका कारण उपचारमा आएका थुप्रै बिरामीमा रोगको पहिचान गर्न नसकिएको बताए । ‘के कारणले ज्वरो आएको हो पत्ता लगाउन प्रयोगशाला परीक्षण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, परीक्षणले समेत पत्ता लगाउन नसक्दा समस्या देखिने गरेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा यस्तो ज्वरो देखिएको छ, जुन परीक्षण गर्नुपर्ने रोगभन्दा पनि बाहिर गएको छ ।
डा. मरासिनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशक हुँदा स्क्रब टाइफस र चाँदीपुरा भाइरस पत्ता लगाइएको थियो । त्यसयता सरकारले नयाँ परीक्षणसमेत गर्न सकेको छैन ।
डा. पुनले पत्ता लाग्न नसकेको ज्वरोका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘टाइफाइडजस्तो लक्षण देखिएको छ । तर, यो टाइफाइड हैन । परीक्षण गर्दा पनि रोग पत्ता लाग्दैन ।’
चिकित्सकहरूले सबै ज्वरो टाइफाइड नभएको भन्दै विचार गरेर मात्रै बिरामीलाई औषधि चलाउन सुझाब दिएका छन् । भारत, चीन, बंगलादेशमा देखिएका रोग नेपालमा परीक्षण गरिँदैन । त्यहाँका रोग नेपालमा प्रवेश गरेका कारण नेपालमा पनि परीक्षणको व्यवस्था गरे धेरैजसो पत्ता लगाउन सकिने डा. पुन बताउँछन् ।